Superbia Vol. 1 Warm Copper Eyeshadow Edition 010
Nude နှင့် Bronzeအရောင်များ ပါဝင်ပါသည်
Matt နှင့် Shimmer effect အရောင်များ ပါဝင်ပါသည်
A high-quality, powdery eye shadow that comes in an exciting packaging: warm nude and bronze tones conjure-up gorgeous eye make-up styles. The variety of effects, from matt to holographic, simply makes every look "superb".
In order for the eye shadow to hold as well as possible, an eyeshadow base should be used before application. If you don't want to blend your eye shadow on the entire eyelid, you can also use it as an eyeliner. To do this, dabanarrow, slanted brush into the eye shadow and apply it along the lash line like an eyeliner, with or withoutawing, and blend lightly if necessary. This createsaspecial eye-catcher.
ကွာလတီအကောင်းစား ပေါင်ဒါ eyeshadowကို စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ပါကင်ဗူးဒီဇိုင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Eye-makeup styleမျိုးစုံအတွက် ညှို့ငင်ဖမ်းစားနိုင်စေမယ့် အရောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ nudeကာလာလေးတွေနှင့် ကြေးနီရောင် toneလေးတွေပါဝင်ပါတယ်။ Effectမျိုးစုံဖြစ်တဲ့ holographic တွေ ၊ mattတွေက eye-makeup lookတိုင်းကို လုံးဝ စူပါဖြစ်စေမှာပါ ။
Beauty Tip Eyeshadowကို ကြာနိုင်သည်ထက်ကြာကြာ အရောင်စွဲစေရန်အတွက် မခြယ်သ ခင်မှာ eyeshadow baseတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပေးရပါမယ်။ မျက်ခွံတစ်ခုလုံးပေါ်မှာ eyeshadowကို blendမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်၊ eyelinerအနေနှင့်လည်း အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။ ဒီလိုပုံစံ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ပြားပြားချွန်ချွန်brushတစ်ချောင်းကို eyeshadowထဲကို နှစ်ပြီး မျက်တောင်လိုင်းတစ်လျှောက်ကို eyelinerလို အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ လိုင်နာအချွန်ဆွဲသည်ဖြစ်စေ မဆွဲသည်ဖြစ်စေ၊ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ပါးပါးလေးတော့ blendလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုခြယ်သခြင်းဖြင့် မျက်ဝန်းနှင့်ဆွဲဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။